ShweMinThar: Gym ဆော့သူ/​လေ့ကျင့်​ခန်း လုပ်သူတွေ ဘယ်အချိန် ဘာစားသင့်သလဲ
Gym ဆော့သူ/​လေ့ကျင့်​ခန်း လုပ်သူတွေ ဘယ်အချိန် ဘာစားသင့်သလဲ
(Golden nutrients timing)
" Gym ဆော့ပြီး ထမင်းစားလို့ရလား၊ မစားပဲနေလိုက်ရင်ကော ? "
" မနက်စာ မစားပဲရော လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရလား ?"
" ကိုယ်ရေထပ်ပြီး စစ်သွားချင်ရင် အစာကို လျှော့လိုက်ရမလား ? "
ဒီလိုဆင်တူမေးခွန်းတွေ မေးလာတိုင်း ဖြေရတာကြပ်ပါတယ်။ မေးခွန်းတစ်ခုစီရဲ့ အဖြေဟာ မေးသူရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ ဆိုင်သလို၊ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲ ဆိုင်သေးပါတယ်။ အဆီများနေလို့ အဆီချချင်တယ်၊ ဘယ်လောက်ပမာဏဖြစ်ဖြစ် အခုအရမ်းဝနေလို့ ကျရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးနဲ့လူရှိသလို၊ အခုအနေအထားမှာ တော်တော်ကျစ်လျစ်နေပြီ၊ ဒါပေမယ့် ထပ်ပြီးတော့ ကျန်သေးတဲ့ အဆီကိုချမယ်၊6packs abs မြင်ရတဲ့ အထိ Body fat percentage ကို ချချင်တယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးလဲရှိတယ်မလား။
ဒီလိုမှ မဟုတ်သေးပဲ အရမ်းပိန်နေပြီး Weight တက်ချင်တယ်၊ ကြွက်သားတက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးလဲရှိသေးတာမို့ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာစားသင့်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေဟာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဖြေလို့မရပါဘူး။ အကြမ်းဖျင်းအနေနဲ့
၁။ အဆီများပြီး ဝနေတဲ့လူက ပိန်အောင် ဘယ်လိုစားသင့်သလဲ
၂။ အဆီသိပ်မရှိတော့ဘူး၊ ကြွက်သားနဲ့ အဆီနည်းနည်းလူက ကြွက်သားမကျပဲ ပိန်သွားအောင်၊ Abs ပေါ်အောင် ဘယ်လိုစားသင့်သလဲ
၃။ ပိန်တဲ့လူက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ ကြွက်သားတက်အောင် ဘယ်လိုစားသင့်သလဲ
သုံးမျိုးခွဲပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုဘာလို့ခွဲရသလဲဆိုတာရဲ့ အကြောင်းပြချက်ကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မတူ၊ ရည်ရွယ်ချက်လဲ မတူတဲ့ လူသုံးမျိုးအတွက် လုပ်သင့်တဲ့၊ လိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကလဲ မတူသင့်ပါဘူး။
ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ"Protein စား၊ အဆီရှောင်၊ ရော့ ဒီလိုစား၊ ဒါပဲစား၊ Protein စား၊ အဆီရှောင် " စသဖြင့် ဒိုင်ခံ အကြံပေးနေရင် ဒါဟာ Trainer ကောင်းတစ်ယောက်ဆီက ရသင့်တဲ့ အကြံကောင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်တုန်းက ဒီလိုပဲ လုပ်ခဲ့စားခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ မတူတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လူကို ဒီလိုစား ဒီလိုလုပ်ဖို့ အကြံပေးရင် မသင့်တော်နိုင်ဘူးဟုတ်။
ဒါ့ကြောင့်လက်တွေ့ကျကျ သင်လိုချင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ရည်မှန်းချက်ကို ရဖို့ ဘယ်အချိန်မှာဘာတွေ စားသင့်သလဲဆိုတာ ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
" သိပ်ဝတဲ့ လူတွေများ အဆီကျဖို့ သိပ်လွယ်တာ"
ဒီလိုများဆိုလိုက်ရင် ရွဲ့တယ်ထင်ပြီး ဝိုင်းရိုက်ကြမလား မသိဘူး။ ရိုက်လဲ မတတ်နိုင်ပေါင်။ မှန်တာပြောနေတာပဲ။
ဝနေတဲ့ လူတွေ ပိန်သင့်သလောက် ပိန်သွားဖို့ လုပ်နည်းက မခက်ပါဘူး။ဘာမှ မလုပ်ပဲ သူတို့ စားနေကျ အစားအစာတွေထဲက အဆီများတဲ့ အစာ၊ အချိုစာ၊ ဒီ နှစ်မျိုးကို စပယ်လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ အနည်းနဲ့ အများ ကိုယ်အလေးချိန်ကျလာမှာပါပဲ။
ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာဖို့ဆိုရင် အဝင်စွမ်းအင်က အထွက်စွမ်းအင်ထပ် များဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ အခြေခံပါပဲ။ ဝနေတဲ့လူတွေရဲ့ တစ်နေ့တာ စားတဲ့ စွမ်းအင်ဟာ တစ်နေ့တာ လှုပ်ရှားလို့ ပြန်သုံးထပ် စွမ်းအင်ထပ် များနေတာက အဓိကပြသနာပါပဲ။ တစ်နေ့တာလို့ ဆိုတာထပ် တစ်ပတ်တာလို့ ပြောရင် ပိုမှန်မယ်ထင်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် အတက်အကျဆိုတာလဲ တစ်နေ့စားလို့ နည်းလိုက်တာနဲ့ ကျသွားတာမဟုတ်။ တစ်ပတ်၊ ၂ပတ် စသဖြင့်မှာ စားတာထပ် လှုပ်ရှားတာက ပိုများမှ ကျလာတာမျိုး မဟုတ်လား။
ဟုတ်ပြီ။ ဝင်တာထပ် အထွက်က များရမယ်။ အစားထပ် လှုပ်ရှားမှုက များရမယ်။ ဒီလိုဖြစ်အောင် ဝတဲ့လူတွေ ဘယ်လိုစလုပ်သင့်သလဲ။
ဝင်တာနည်းအောင်လုပ် (အစားလျှော့)၊ ထွက်တာများအောင်လုပ် (လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်)၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခုစလုံး ပြိုင်တူလုပ် (အစားလဲ လျှော့၊ လေ့ကျင့်ခန်းလဲ လုပ်) ဆိုပြီး သုံးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီ သုံးသပ်ကြည့်ကြရအောင်။
ဝတဲ့လူတွေအတွက် ဒီနည်းဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ပထမ စဝလာတယ်ဆိုတာကလဲ အဝင်အစားအသောက်က သူများထက်များခဲ့လို့ မဟုတ်လား။ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ် လိုတာထပ်ပိုစားခဲ့လို့ ငယ်တုန်းကလဲ ဝနိုင်သလို၊ တစ်ချို့ အစာခြေနှုန်းနှေးသွားတဲ့ အခါ အသက်ရလာတယ်နဲ့ ဝလာတာပါပဲကော။
ဒါတွေအားလုံးရဲ့ ပထမတရားခံဖြစ်တဲ့ အစားများတာကို ဖြေရှင်းချင်ရင်တော့ အစားလျှော့ရမယ်ဆိုတာ ငြင်းမရပါဘူး။ ဒီမှာတော့ အကြမ်ဖျင်းအနေနဲ့ ဆီကြော်ရှောင်၊ အချိုရည် သကြားရှောင် လို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုကို ရှောင်လိုက်တာနဲ့တင် ဝတဲ့လူတွေ ကိုယ်ချိန်ကျလာတာ ဒုနဲ့ဒေးပါ။ ဒီတော့ ဆီကြော်နဲ့ သကြား၊ အချိုရည် ရှောင်ပါ။
အရမ်းဝတဲ့ လူတွေအနေနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အပြင်းစား မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ ရသလောက် လမ်းလျှောက်တာ၊ ပြေးတာ၊ Gym စက်ဘီးစီးတာ၊ ဒါမှမဟုတ် Page ထဲက အိမ်မှာပဲ လုပ်နိုင်တဲ့ အဆီချလေ့ကျင့်ခန်းVideo တွေထဲက အတိုင်းလုပ်တာ စသဖြင့် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
-အစားလဲလျှော့၊ လေ့ကျင့်ခန်းလဲ လုပ်-
ဒီဆောင်းပါးမှာ အဓိကပြောချင်တာက ဒီတစ်ခု အကြောင်းပါ။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာစားသင့်သလဲ ခေါင်းစဉ် တပ်ထားတာကိုး။
အစားလျှော့ဆိုလို့ အစားလျှော့ပြီ၊ တစ်ချို့ဆို စားတောင် မစားပဲ လေ့ကျင့်ခန်းပဲ လုပ်ကြတာတောင် ရှိသေးတယ်မလား။ စိတ်အားထက်သန်တယ်၊ စိတ်မာတယ် ဆိုပေမယ့်လဲ မမှန်ကန်ရင် အချည်းနှီး ဖြစ်သွားတတ်တာမလို့ အစာမစားပဲ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်သင့်ပါဘူးလို့ ပြောပါရစေ။ ဒီတစ်ချက်လောက် ခေါင်းထဲ အသိတိုးသွားရင်ပဲ ရေးရကျိုးနပ်ပါပြီ။
"အစာမစားပဲ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ပါနဲ့ "
(ဒီနေရာမှာ အစာမစားပဲ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ ကောင်းကြောင်း ဆောင်းပါးတွေလဲ ရှိပါတယ်။မကောင်း မဟုတ်ပါ။သူ့နေရာနဲ့ သူကောင်းတာရှိပါတယ်။ အစာမစားပဲ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာကို Fasted exercise လို့ခေါ်ပြီး သူ့အကြောင်းက ဒီနေရာမှာ သိဖို့ မလိုသေးပါဘူး)
ဘာလို့ အစာမစားပဲ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်သင့်သလဲ???
ဟုတ်ကဲ့။ အထွက်စွမ်းအင်က အဝင်စွမ်းအင်ထပ် ပိုများအောင် အစာမစားပဲ လုပ်တယ်ကွာလို့ သာမန်တွေးရင် မှန်သလိုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစာတိုင်းဟာ ဆိုးရွားပြီး ဝစေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အာဟာရ ရှိစေတဲ့ အစာတွေကို စားခြင်းက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရာမှာ အားရှိပြီး ပိုလုပ်နိုင်စေတယ်။ အစာမစားပဲ လုပ်ရင် အားမရှိပဲ မလုပ်နိုင်တာထပ် အစာစားပြီး ပိုလုပ်နိုင်တာက အကျိူးပိုသက်ရောက်စေပြီး အဆီပိုကျစေပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီ စားထားတဲ့ အစားအစာဟာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်မှာရော၊ လုပ်အပြီးမှာပါ အသုံးပြုလို့ အဆီဖြစ်မသွားပါဘူး။ ။ ဒါ့ကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်မီ ၂နာရီ အကွာလောက်မှာ ဆီကြော်တွေ အချိုမဟုတ်တဲ့ အစာတွေ မပါတဲ့၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီစွာချက်ထားတဲ့ အသားငါးတွေ စားရင် သင့်တော်ပါတယ်။
မလုပ်ခင် စားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ လုပ်ပြီးရင်ကော။ မနက်ပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင် နေ့လည်စာကို ထမင်း ဟင်း(ဆီကြော်၊ဆီများမဟုတ်) စားတာ ပြသနာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ညနေပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖြစ်လို့ ညစာစားမယ်ဆိုရင်တော့ Carbohydrate ဖြစ်တဲ့ ထမင်းကို လျှေားစားရင်စား၊ မဟုတ်ရင် အရှင်းမစားလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရွက်ကြော်လေးနဲ့ အသားပဲ စားရင်စား၊မဟုတ်လဲ ထမင်းကို အရင်စားတာထပ် လျှော့စားလုပ်ပါ။ အဓိကအချက်က ဒီအချိန်မှာ အစားဟာ စားတယ်ဆိုရုံလောက်နဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်ကို ခန္ဓာကိုယ်က အဆီကနေယူပါလိမ့်မယ်။
ဒီလောက်ဆို ဝတဲ့လူတွေ အနေနဲ့ မနက်နဲ့ နေ့ခင်းမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီစွာ ချက်ထားတဲ့ (ဆီကြော်မပါ၊ အချိုရည်မပါ၊ ဆီများဟင်းမပါ) အစားအစာကို ပုံမှန်စားနေတာထပ် လျှော့စား၊ လေ့ကျင့်ခန်းကို ညနေပိုင်းလုပ်ရင် ညစာကို ထမင်းလျှော့၊ ဒါမှမဟုတ် အရွက်ကြော်၊ အသားပဲစား စသဖြင့် နားလည်လောက်ပါပြီ။ ရိုးရှင်းတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီနည်းဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပါတယ်။ အဓိကအချက်က အဝင်အစားအစာထပ် အထွက် တစ်နေ့တာ လှုပ်ရှားမှုက များရမယ်ဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့လို့။
ဒီလိုလူတွေအနေနဲ့ အရင်ဆုံး "ချရခက်တဲ့ ဗိုက်ခေါက်အဆီကို လက်တွေ့ကျကျ ဘယ်လိုချမလဲ " ဆောင်းပါးကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ Page ထဲမှာ တင်ပြီးသားပါ။
အကြမ်းပြန်ပြောရရင် ဒီလူတွေအတွက် အလေးမတဲ့နေ့မှာ များများစားမယ် (များများဆိုတာ Protein နဲ့ Carbohydrate)၊ အလေးမမတဲ့နေ့ Cardio လုပ်တဲ့နေ့မှာ နည်းနည်းစားမယ် (Carbohydrate မပါသလောက်နဲ့ Protein များများ) ဆိုတဲ့ နည်းပါပဲ။ တစ်ခုသတိပြုစေချင်တာက အလေးမဆော့တဲ့နေ့ကို နားရက်လို့ သတ်မှတ်ပေမယ့် နားရက်ဆိုတာ ဘာမှလေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်တာကို မဆိုလိုပါဘူး။ နားရက်ဆိုတာ Cardio အဆီချလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့နေ့ပါ။
အလေးမရင်း 6packs abs ပါရအောင်လုပ်ချင်တဲ့လူ၊ ဒါမှမဟုတ် Golden dreams page ကို အမြဲဖတ်တဲ့လူလို့ ယူဆတာမလို့ အခြေခံ အသုံးအနှုန်းတွေ၊ သိသင့်တာတွေကို အောက်ခြေသိမ်း မပြောတော့ပါဘူး။ ပြောရင်လဲ ဒီဆောင်းပါးပြီးမယ် မထင် ။ အခုမှ Golden dreams page ပရိသတ်အသစ်ဆိုရင်တော့ အချိန်ရရင် တခြားဆောင်းပါးတွေ ဝင်ဖတ်ကြည့်ပါလို့။
အလေးမတဲ့ နေ့မှာ များများစားမယ်။ ဘာတွေ ဘယ်အချိန်စားရမလဲ ???
မနက်အိပ်ရာထ၊ မနက်စာစားပြီ ဆိုပါစို့။ Protein များများနဲ့ Carbohydrate များများ (Carb က တအား များများ မစားလဲရပါတယ်၊ ပါသင့်သလောက်စားပေါ့) မနက်စာ စားလို့ရပါတယ်။ Carbohydrate ကို အများကြီး မစားခိုင်းတာကို အကြမ်းပြောပါရစေ။
Carbohydrate ဆိုတာ မန်လည်ဆရာတော် ဘုရားကြီး ရေးခဲ့ဘူးသလို (မန်လည်ဆရာတော် ဟုတ်မဟုတ်တော့ ဝိုးတဝါးဖြစ်နေပြီ၊ တွတ်ပီထဲမှာ ပါတာ မှတ်မိလို့ 😄😄😄) " မိန်းမဆိုတာ မရှိမကောင်း၊ ရှိမကောင်း" ဆိုတာလိုမျိုး။
Carbohydrate ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် စွမ်းအင်ပေးလို့ လိုအပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် လိုအပ်တဲ့ ပမာဏနဲ့ ကွက်တိကျစားရင် အဆီမကျ၊ များသွားရင် အဆီဖြစ် စသဖြစ် အကြမ်းပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တအားမများစေပါနဲ့။ အနည်းငယ်လိုသွားရင်တောင် စွမ်းအင် ဒုတိယ အခြေအမြစ်ဖြစ်တဲ့ Protein ကနေ ယူနိုင်သေးတာမလို့ Carbohydrate ကို များများစား၊ များများလုပ်တဲ့နေ့မှာ စားပါဆိုပေမယ့် တအားကြီး မစားစေချင်တာပါပဲ။
ပြန်ဆက်လိုက်ရအောင်။ မနက်စာကို Protein နဲ့ Carbohydrate စားပါ။ Proteinကို ကြက်ဥ၊နို့၊ အသား၊ Protein powder စတာတွေက ရနိုင်ပြီး Carbohydrate ကို ထမင်း၊ ပေါင်မုန့်၊ Oat စတာတွေက ရနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ရဲ့ အစမလို့ စွမ်းအင်ပိုပြီး အဆီဖြစ်သွားစရာမရှိပါဘူး။ မနက်စာ အပြီး နောက်တစ်နပ်က နေ့ခင်းစာ (အလေးမဆော့ခင်အစာ)ပေါ့။ မနက်စာစားပြီး အလေ့းဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ မနက်စာက အလေးမဆော့ခင် အစားအစာပါပဲ။
အလေးမဆော့ခင် ဘာစားမလဲ ??
အလေးမဆော့ခင် ၂နာရီ ၃နာရီ အလိုလောက်မှာ နေ့လည်စာ အဖြစ်စားလေ့ရှိသူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ နေ့လည်စာ စားပြီး ၄နာရီအကြာလောက်မှ ရုံးဆင်း အလေးဆော့သူတွေလဲ ရှိတယ်ဟုတ်။
နေ့လည်စာ Protein များများနဲ့ Carbohydrate များများ (လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်မီ အစာမှာ Carbohydrate များများစားလို့ရပါတယ်) စားထားပြီး ၂၊၃နာရီ အကြာမှာ အလေးဆော့မယ်ဆို အားအပြည့်နဲ့ ဆော့နိုင်မှာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ နေ့လည်စာအပြီး ၅၊ ၆နာရီမှ အလေးဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ အားအနည်းငယ် လျော့သွားတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မလို့ အလေးမဆော့ခင် အဆာပြေအဖြစ် တစ်ချို့လူတွေ ထပ်စားလေ့ရှိတာပါပဲ။
အဆာပြေဟာလဲ Protein နဲ့ Carbohydrate ပါပဲ။ ဥပမာအနေနဲ့ ပေါင်မုန့်ညို ၂ချပ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကြက်ဥဖြစ်ဖြစ်၊ ဒိန်ချဉ်ဖြစ်ဖြစ် အနည်းငယ်လောက်ကို အလေးမဆော့ခင် မိနစ် ၃၀အလိုလောက်မှာ စားထားရင် ပိုပြီး ဆော့နိုင်မှာဟုတ်။ မေ့လို့။ Protein shake ကိုလဲ မလုပ်ခင် မိနစ် ၃၀မှာ အဆာပြေအဖြစ် သောက်လို့ရပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်မီ ဘာစားရမလဲသိပြီးရင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်စဉ်မှာရော ??
များများစားစားမရှိပါဘူး။ ရေသောက်ရင်သောက်၊ မသောက်ရင် Protein shake ကို ရေအစား တစ်ဆစ် တစ်ဆစ် သောက်နိုင်ပါတယ်။
- လေ့ကျင့်ခန်းအပြီး -
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်အပြီး အချိန်ဟာ ကြွက်သားတွေ ပြတ်တောက်ချိန်၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ချိန်၊ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေကို သယ်ယူပို့ဆောင်ချိန်ပါပဲ။ ဒီအချိန်မှာ Protein၊ Carb များများစားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ 6packs ရချင်လို့ အလေးမပြီး အချိန်မှာ အစားရှောင်သူတွေ ရှိရင် မရှောင်ပါနဲ့လို့။ ဒီအချိန်မှာ အာဟာရကောင်းမွန်တဲ့ အရွက်၊ အသားငါး၊ ထမင်း ဘာမဆို စားလို့ သင့်တော်ပါတယ်။ ဆီကြော်တွေ၊ အချိုရည်တွေက လွဲလို့ပေါ့။
ဒီလောက်ဆို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် များများစားတဲ့ နေ့မှာ ဘယ်လိုစားရမလဲ ဆိုတာသိပြီဟုတ်။ ဒါဆို နားရက်၊ Cardio ရက်မှာ ဘာစားရမလဲ ???
ဒီနားရက်၊ Cardio ရက်မှာ မနေ့က လုပ်ခဲ့တဲ့ အလေးဆော့လို့ ပြတ်သွားတဲ့ ကြွက်သားတွေဟာ ပြန်တည်ဆောက်နေတုန်းပါပဲ။ မနေ့က စားခဲ့တဲ့ Carbohydrate အရှိန်နဲ့ ဒီနေ့မှာစားမယ့် Protein အသစ်တွေဟာ ကြွက်သားအသစ်တွေ ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးမှာပါ။
"ဒီနေ့မှာ စားမယ့် Protein" လို့ရေးထားတာ သတိပြုမိတယ်ဟုတ်။ ဒီနေ့မှာ Carbohydrate မလိုပါဘူး။ ဒီတော့ Carbohydrate ဖြစ်တဲ့ ထမင်း၊ ဂျုံ၊ ခေါက်ဆွဲ၊ အာလူး စတာတွေကို နည်းနိုင်သလောက်၊ ဒါမှမဟုတ် လုံးဝမစားပဲနေလို့ရပါတယ်။ အခုလိုနည်းက အနည်းငယ် အဆီရှိပြီး 6packs abs ပေါ်ချင်သူတွေအတွက် နည်းမလို့ နည်းနည်းတော့ အငတ်ခံရမှာကို မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ နားရက်၊ Cardio ရက်မှာ Carbohydrate ကို 50 grams (တော်တော်နည်းတဲ့ ပမာဏ) သို့မဟုတ် မစားပဲ နေတာက Abs ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အဆီတွေကို နားရက် Cardio ရက်မှာ ကျစေတာပါပဲ။ ဒီတော့ နားရက်မှာ Carb ကို လျှော့ချပြီး Protein များများစားပါ။
ဒီလောက်ဆို အဆီအနည်းငယ်ရှိပြီး Abs ပေါ်ဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေ ဘယ်အချိန် ဘယ်လိုစားသင့်လဲ ဆိုတာရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေ သိလောက်ပြီဟုတ်။
ပိန်တဲ့လူအတွက်က နံပတ်၁ရဲ့ ပြောင်းပြန်ပါ။ အထွက် (လှုပ်ရှားတာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ) ထပ် အဝင် အစားအသောက်က ပိုများရပါမယ်။ ဒီလိုများဖို့ဆို လုပ်နိုင်တာက ပိုစားဖို့က လွဲပြီး မရှိပါဘူး။ (လေ့ကျင့်ခန်း လျှော့ပါလို့တော့ မပြောပါဘူး)
ပိန်သူတွေ အလေးဆော့မယ်ဆိုရင် Protein နဲ့ Carbohydrate ကို အပေါ်က နံပတ်၂အတိုင်း၊ များများစား များများလုပ် နည်းနဲ့ စားပါ။ ဒါပေမယ့် Carbohydrate ကို လျှော့စရာမလိုပါဘူး။
နားရက်မှာလဲ Carbohydrate နဲ့ Protein များများစားပါ။ အပေါ်ကလူတွေလို အဆီမကျချင်တာမလို့ Carbohydrate ကို ရှောင်စရာမလိုပါဘူး။ ဘယ်အချိန် ဘာစားရမလဲဆိုတာကလဲ အပေါ်က နံပတ် ၂အတိုင်း လိုက်စားနိုင်ပါတယ်။
မတူတာက Carbohydrate ကို လျှော့စရာမလိုပဲ Carbohydrate နဲ့ Protein ကိုများအောင်စား။ ဘယ်လောက်စားရမလဲဆိုရင် အဝင်အစားအသောက်က အထွက်လှုပ်ရှားမှုထပ် များအောင် စားရမှာပါပဲ။ တစ်လကို ကိုယ်အလေးချိန် ၁.၅-၂.၅ ပေါင်လောက်တက်လာရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
သိပ်ခက်ခက်ခဲခဲ မရှိပါဘူး။ တစ်ခုပဲ သတိပြုစရာဆိုလို့ ဆီကြော်စာတွေ ရှောင်ရုံပါ။
ဒီလောက်ဆိုရင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့လူတွေ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာစားသင့်သလဲ၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်အပြီးမှာ ဘာမှ မစားပဲနေတာထပ် ဘယ်လိုစားရမလဲ စသဖြင့် အကြမ်း နားလည်လောက်ပါပြီ။
Page ထဲမှာရှိကြတာ လူဆိုဒ်မျိုးစုံ၊ ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံဆိုတော့ အားလုံးအတွက် ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးတော့ ရှည်သွားတာပေါ့။ ဘယ်လိုပဲရှည်ရှည် လိုအပ်မယ့်သူတွေအတွက်တော့ ဖတ်မိသွားရင် အသုံးအများကြီးဝင်မှာ မလွဲပါပဲ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှိရင်လဲ Admin ကိုယ်စား ကူညီလက်တို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
မူလရေးသားတင်ဆက်သူ - Golden_Dreams ❤️